Global Aawaj | » प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व – Global Aawaj
प्रजातन्त्र दिवसको महत्त्व
प्रजातन्त्रको स्थापनाको साथै देशमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक चेतना निकै बढेर गयो । नेपाली जनता आफ्ना राजनीतिक अधिकारप्रति निकै सजग र सचेत हुन थाले । सबै देशवासीहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध हुन थाले ।
राजनीतिक चेतनाकै परिणामस्वरूप देशमा पहिलो पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनको परिणामस्वरूप नेपाली काँग्रेसका नेता वी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलबाट देशको शासन सञ्चालन हुन थाल्यो । यस जननिर्वाचित सरकारले धेरै समयसम्म काम गर्न पाएन । यसको विकल्पमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा लामो समयसम्म सङ्घर्ष चलिनै रह्यो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा जनमत सङ्ग्रह पनि गरियो । यस जनमत सङ्ग्रहपछि पनि सार्थक परिणाम निस्कन सकेन । त्यसपछि पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा विभिन्न खाले आन्दोलन तथा विद्रोह भई नै रह्यो । यस्तै किसिमको विद्रोह, असन्तुष्टि, आन्दोलनको बीचमा संविधानसभाको कुरा ओझेलमा पर्दै गयो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको साथै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि पनि जनअसन्तुष्टि व्याप्त नै रह्यो । यसै जनअसन्तुष्टिको बीचमा माओवादी सशस्त्र जनविद्रोहको प्रारम्भ भयो । यसको परिणाम स्वरूप सरकारी र विद्रोही दुवै पक्षका निकै मानिसहरू मारिए । यस्तै अशान्ति र विद्रोहको बीचमा दरबार हत्याकाण्ड भयो । यस हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नास हुन पुग्यो । राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि देशको शासन सत्ता राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पर्न गयो । देशमा अशान्ति तथा असन्तोषले निरन्तरता पाई नै रह्यो । माओवादीहरूले सशस्त्र विद्रोहको अभियानलाई विश्राम दिने निर्णय गरे ।
माओवादी र विभिन्न दलका नेतृत्वका बीचमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सहमति भयो । यस जनआन्दोलनले पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त ग¥यो र राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भयो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति हुने सौभाग्य नेपाली काँग्रेसका डा. रामवरण यादव र प्रथम प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्राप्त भयो । त्यसपछि क्रमशः नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई क्रमशः गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त भयो । तर संविधानसभाबाट संविधान बनेको देख्ने नेपाली जनताको इच्छा पूरा हुन सकेन । त्यसै हुनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट संविधानसभा विघटन गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को गठन भयो । यस मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यो ।
यस चुनावपछि नेपाली काँगे्रस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो । नेपाली काँगे्रसका सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका के.पी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई क्रमशः प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त भयो । सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा देशले महाभूकम्पबाट ठूलो धन जनको क्षति ब्यहोर्नु प¥यो तर संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । अनि के.पी. शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्व कालमा मित्रराष्ट्रको भारतले आघोषित नाकाबन्दी ग¥यो । यस घटनालाई राष्ट्रियतासँग जोडिएर हेर्न थालियो ।
सरकार परिवर्तन भए पनि देशमा सङ्घीयता सम्बन्धी अनेक चुनौती रहेका छन् । संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नपुग्दै दोस्रो संशोधनको प्रयास भइरहेको छ । प्रदेशका सीमाङ्कन र नामाङ्नसम्बन्धी निर्णय हुन सकेका छैनन् । एकथरि संविधान संशोधनको विषय थाँती राखेर विभिन्न तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छन् भने अर्कोथरि पहिले संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छन् । यसको साथै तेस्रोथरि संविधान कार्यान्वयन नगरी संसोधन गर्नु हँुदैन भन्ने पक्षमा छन् । यी सबैको बीचमा मध्यस्थता गर्ने शक्तिको खाँचो देखिएको छ । -प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय /गोरखापत्र